Ekhabetheni - isibambiso wenduduzo ekhishini
Hlomisani ikhishi - akuwona umsebenzi olula. Ekhishini akufanele kuphela hlanganisa ezikhangayo design isixazululo kanye lula, kodwa futhi ukuba ergonomic ngokuya isikhala ukonga. amakamelo Small ngokukhethekile kudingeka yenchubomgomo okunengqondo ilungiselelo yonke impahla yasendlini ezidingekayo nezinye izinsimbi.
Njengoba inqubo ukupheka ekhishini ukusebenzisa ezihlukahlukene ezahlukene kumadivayisi lobuchwepheshe, izinto nemishini, ikhishi elincane ngokuvamile bheka onezinto up. Kodwa mikhuba uvumele abanikazi ngisho izikhala kulencane wengeze lula kubo, ukuhlomisa nabo izinhlelo beya. Zonke izinhlobo amabhokisi nobhasikidi lokuzula uhlobo enze kube nokwenzeka ukuba wenze ekhishini ergonomic kakhulu, futhi inqubo ukupheka - kujabulise kakhudlwana.
Indlela ukuhlomisa ekhishini izindlela ekhabetheni?
Kufanale agqoke izikhindi zangaphansi for ekhishini ingenye ongakhetha ethandwa kakhulu ukuze wonge isikhala. Ngokuvamile, izindlela ezinjalo ukufakwa phakathi amakhabethe abavamile noma uhlanganyela. Wonke umuntu bayokwazisa lula le ndlela: Ivula shazi ikamelwana umnyango ejwayelekile, kodwa umbono wavula amabhokisi ambalwa noma obhasikidi, ibekwe emazingeni ehlukene. I lokuzula okuhle ukuthi ngokuphelele uyaphuma ngesikhathi kuvulwa, ukuze ukwazi ukukhulisa ukugcwalisa emuva.
Okuthile sifana lokuzula wuhlelo butylochnits beya. Ziyahlukahluka kuye kuphela yobukhulu bawo. Ngokuvamile, ububanzi butylochnitsy ekhishini ayibi ngaphezu kuka 15-20 cm, ukuze ingafakwa ezikhaleni ewumngcingo lapho kukhona isikhala esanele for iKhabhinethi evamile. Butylochnitsy Ingxenye kwangaphakathi kuhlukaniswe eziningana, okuyinto zingafakwa ezintweni emincane futhi mude. Nale iKhabhinethi ugcwele ukusetshenziswa isikhala esincane esisele phakathi ukuvuleka nezinye ifenisha.
Ikhishi iKhabhinethi nge zangaphansi
Tumba yenza kube lula ukusabalalisa ezidingekayo ekhishini Imishini kanye izesekeli endaweni yayo. ifenisha yesimanje zingamelana imithwalo esindayo. Kubalulekile wazi ukuthi lawa amabhokisi zivaliwe buthule ngisho nalapho egcwele.
izinhlelo asizayo ekhishini zangaphansi
Ngaphandle amabhokisi yokugcina ukudla, ikhishi idinga ezihlukahlukene amadivayisi ukusiza ukulungiselela ukudla, ukwamukelwa kanye bebutha indle ekudleni. Ngezansi Igama ukuchaza imiklamo eziningana, okuyinto lula umsebenzi ekhishini hhayi kuphela, kodwa futhi wonge isikhala.
1. udonse ukuphuma ukuzisika ibhodi.
It isethwe ngaphakathi worktop, indlela okuthi uma kuvulwa yandisa. Lokhu zonke ajwayelekile ekhishini izesekeli, okwethulwa kuveze engavamile, kungenziwa ifakwe i isitsha elisizayo, okuyinto kahle ukuqoqa isinkwa imvuthu noma imikhiqizo oqoshiwe for izitsha. Uma usule libanzi, ungakwazi ukuyifaka endaweni lokuqobela amabhodi ambalwa eyenziwe ngepulasitiki noma ukhuni.
2. "carousel" uhlelo.
Ngokuvamile, ifenisha ekhishini ekhiqizwa ngesimo incwadi L. Ngakho, Nokho, sokulalela, hhayi kakhulu esilungele ekhoneni amakhabethe. Lezi ikhabethe kukhona esingesihle ngenxa remoteness yayo kanye nobunzima bagcwalisa ngokuphelele into, uma iKhabhinethi itholakala phezulu. "Carousel" indlela kulula ukuqeda lezi zinkinga. Uhlelo indlela efakwe umnyango noma uhlangothi iKhabhinethi, futhi ivula ngaphandle nibonakala ngokusebenzisa isandiso egcwele. Multifunction kwesigaba enze kube nokwenzeka ukuba ziwagcina ezihlukahlukene izitsha kanye Cookware, kusukela amapuleti ziphethe amabhodwe namapani.
3. ithebula udonse ukuphuma.
Lokhu lithathelwe kuyoba into esisemqoka ekhishini, okuyinto sincane kakhulu. Leli thebula lihlelwe phezulu esiphikisayo noma aboshelwe lokuzula elise ngezansi.
4. Amabhakede kudoti.
Ngokuvamile, lezi zinqolobane ezibekwe ngaphansi echibini. Amabhakede kudoti nge umklamo beya, efana amabhokisi exhunywe esesayidini umnyango noma eshalofini ne komzila. Abanye model udoti iziqukathi ifakwe ephakamisa othomathikhi isivalo emva isicabha.
5. Esincane amabhokisi ime mpo.
Lokhu lokuzula ngokuvamile etholakala eduze nosinki. izindlela ezinjalo akudingeki Amahhovisi namanethiwekhi, kodwa kuyoba kukho okuhle ukuthunyelwa ekhishini izitsha. Usayizi ikhabethe, kanye ukumisa yayo butylochnitsy okusikhumbuza okuye kushiwo ngenhla.
Okunye ekhishini uhlelo wokudonsa ukuphuma
Donsela ukuphuma izakhi ekhishini abe ukuvulwa ngqo noma emincane ukuthi kuchazwe isakhiwo yayo. Ukugcina isikhala ikhishi elincane, efakwe a hood retractable, ayina ibhodi noma iKhabhinethi nge zangaphansi. element ngayinye yakhelwe ukuze lapho umnyango ivulekile akusho bungakhiphi yimuphi umsindo, kodwa unga emashalofini ngokushelela evulekile.
Ekhabetheni uhlelo - isihluthulelo induduzo ekhishini
Ngokuhlela isikhathi yesimanje ekhishini lokuzula izinhlelo, wenza kube lula kakhulu futhi ergonomic more. Ngaphezu kwalokho, lezo zivumelwano ukuletha umoya yesimanjemanje kanye Minimalism ekuklanyweni ekhishini, okukuvumela ukuba uqaphele imibono original kakhulu.
Ikhambi best ngelungiselelo compact zonke impahla edingekayo nezinto ezihambisana ngeke zangaphansi for ekhishini. izinhlobo ezahlukene, ifomu bese umsebenzi, la mabhokisi ezisizayo ekwenzeni ukusetshenziswa okunengqondo ngaphezulu isikhala. Bazokusiza ukuzuza ngisho kusukela ezibonakala ezingadingekile izikhala ezincane phakathi amakhabethe.
Negesi entwasahlobo ngoba ifenisha: Uhlolojikelele, izici, izinhlobo nezilinganiso
Frameless Ifenisha - imibhede: ngobuhle nangobubi bawo
Umbhede intsha, yini okufanele kube nini?
Izingane Modern Imibhede transformers
T itulo Eames: incazelo kanye nokubuyekeza
Okunethezeka usebenzile yensimbi ifenisha
Oshiselelayo "Resanta AIS-250": impendulo wesifunda
Amasilinda umfutholuketshezi ngokuba isikhamo sewayini: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa, izici kanye nokubuyekeza
Izindinganiso zokuziphatha - isisekelo ubuhlobo babantu
Ibubulo elenziwe ngesimbi izandla siqu: lokho Kuzothatha?
Hunting carbine - I-medium and enkulu izilwane
Indlela esiphatha ngayo futhi kuvimbele inja bite
Sivumelwano nerhasi: essence, ukusetshenziswa, imvelo, ukuqeqeshwa, inqubo ephetha, ukuchibiyela, izibonelo isandla. Isivumelwano yesabelo somhlaba e maqondana into kamasipala
Emabhulashini "Ekotuls": ukubuyekezwa. Taklonovye Makeup emabhulashini Ecotools
Indlela Yokukhetha thermostat for Ukushisa phansi izinhlelo
- Inkululeko ... Freedom isakhamuzi. Law and Freedom